Jereo izay azo jerena ao San Antonio, Ibiza | Vaovao momba ny dia
Ny tanànan'i San Antonio, fantatra koa amin'ny San Antonio Abad na Sant Antony de Portmany. Ity tanànan'ny Ibiza ity dia iray amin'ireo malaza indrindra ary seranan-tsambo manandanja ao amin'ny nosy hatramin'ny sivilizasiôna voalohany. Amin'izao fotoana izao dia lasa toerana fizahan-tany be dia be ao amin'ny nosy Ibiza.
Ity tanàna ity dia toerana fizahan-tany miavaka amin'ny fananana habaka voajanahary tsara tarehy, morontsiraka maro ary koa tolotra kolontsaina tsara. Io no nahatonga an'ity toerana ity ho iray amin'ireo toerana mpizahatany indrindra eto amin'ny nosy Ibiza.
1 San Antonio any Ibiza
2 Fiangonan'i san antonio
3 Promenade sy ny seranana
4 Ranomasina sy coves
5 Tanàna mahafinaritra akaiky
6 Hetsika any San Antonio
San Antonio any Ibiza
Io mponina io dia nonina nandritra ny taonjato maro, satria nahitana sary hosodoko natao tao amin'ny lava-bato Sas Fontanelle. Tany amin'ny Mediteraneana izy io dia notsidihin'i Punics sy Romanina koa. Ity mponina ity dia nonenan'ireo Arabo taty aoriana, izay nampiditra ny fambolena. Efa tamin'ny taonjato faha-XNUMX, ny Mpanjaka Jaime I any Aragon, izay nizara efatra ny nosy, ka Portmany ny iray. Efa tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo no nananganana ny tanànan'i San Antonio. Seranana iray manan-danja ity toerana ity ary mbola iray amin'ireo teboka be mponina indrindra amin'ny nosy.
Fiangonan'i san antonio
Ny iray amin'ireo zavatra hita ao an-tanànan'i San Antonio dia ny fiangonany taloha. Ity fiangonana ity dia niorina tamin'ny taonjato faha-XNUMX kanefa vita ny trano tamin'ny taonjato fahafito ambin'ny folo. Indraindray ny fiangonana dia nampiasaina ho toy ny tilikambo fiarovana noho ny toerana misy ny tanàna manoloana ny morontsiraka, ary koa ho trano mimanda, satria iray amin'ireo tranobe matanjaka sy manan-danja indrindra izy io. Hatramin'ny taonjato faha-XNUMX, ny evekan'i Tarragona dia fehezin'ny mponina, ary nampiasain'ny evekan'i Ibiza voalohany.
Promenade sy ny seranana
Ny faritry ny seranana dia mbola manandanja be ao amin'ity tanànan'ny San Antonio ity. ATSINANANA mitazona tsara ny boardwalk ary izy dia toerana tsara handehanana, misy hazo rofia sy loharano, izay hazava hatrany amin'ny alina. Ankoatr'izay, amin'ity faritra ity dia azo atao ny mahita trano fisotroana sy trano fisakafoanana hahafahana manandrana ny sakafo ao amin'ny nosy ary mankafy ny rivo-piainana velona.
Ranomasina sy coves
Raha misy zavatra miavaka amin'ny Ibiza rehetra dia ny moron-dranomasina sy ny zaridaina no hitantsika isaky ny faritra. San Antonio dia iray amin'ireo toerana miavaka amin'ireo faritra feno fasika ireo. Ny morontsiraka lehibe antsoina hoe S'Arenal eo akaikin'ny lalamby no misy azy. Izy io dia iray amin'ireo morontsiraka be mponina indrindra, noho ny toerana misy azy, satria manana karazana tolotra rehetra izy ary koa satria manome rano milamina sy marivo. Ity mpihira ity dia manana mpihaino tanora ary rivo-piainana tena velona.
Ao amin'ny Morontsiraka Caló des Moro azo atao ny mahita lampihazo hazo ho an'ny sun berjentika. Ampahefatry ny ora an-tongotra dia afaka mahita an'i Cala Gració sy Cala Gracioneta ianao. Azo atao ny miala kely kokoa amin'ity faritra ity mba hahita coves hafa, toa an'i Cala Bassa, Cala Conta na Cala Salada.
Tanàna mahafinaritra akaiky
Rehefa mandeha somary miala ny afovoan'i San Antonio ianao dia afaka mahita tanàna tsara tarehy manana ny hatsarany ary tsy dia feno olona, ​​ka dia mangina izy ireo. ny tanànan'ny Santa Inés Manana saha almond izy io. Akaikin'ny tanàna dia ilay faritra fantatra amin'ny anarana hoe Puertas del Cielo, izay misy hantsana tsara tarehy afaka mahita fomba mahavariana. Ity koa dia toerana tsara hijerena ny masoandro mody.
En San Rafael azo atao ny mankafy ny fomba fijery tsara an'i Dalt Vila. Manana fiangonana mahafinaritra izy ary azo atao koa ny mahita santionany amin'ny sangan'asa vita tanana, toerana iray ahafahana mahita ny kolontsaina Ibizan marina. Ny iray amin'ireo tanàna eo akaiky eo koa dia i San Mateo, faritra mangina kokoa izay ahafahanao mankafy làlambe sy toerana fitsangantsanganana izay tsy dia feno olona loatra amin'ny fizahan-tany amin'ny nosy.
Hetsika any San Antonio
Ity faritra Ibiza ity dia toerana mavitrika tokoa, misy zavatra maro hatao, satria faritra be mpizahatany izy io. Ity faritra ity no misy ny sasany amin'ireo clubclub manan-danja indrindra, toa ny Tombontsoa na Amnesia. Ao an-tanàna dia azonao atao koa ny mankafy fety sasany izay mamelona ny habakabaka mandritra ny taona, toy ny Flower Power Festival amin'ny volana Janoary na ny Medieval Marinera Fair.
Any San Antonio de Ibiza dia afaka manao hetsika hafa ianao. ny ny fanatanjahan-tena amin'ny rano dia mety ho fialamboly lehibe, indrindra mihevitra fa manana seranan-tsambo manan-danja izy io. Manomboka eto dia afaka mandeha sambo na sambo mankany amin'ny faritra hafa na nosy akaiky ianao. Ny hevitra fanofana sambo hanao fety amin'izy ireo dia malaza be koa.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » Fialantsasatra any Eropa » España » Inona no ho hita any San Antonio, Ibiza
Hotely any New York, safidy mora vidy